Dhismayaasha | November 2019
Kaaliyeyaasha guryaha ee aan loo baahnayn ee loogu talagalay dadka jecel beeraha - waxay sameeyn karaan mini-lagu koriyo guriga
Geedo wanaagsan - ballanqaadka ah ee miro wanaagsan. Dhirta dhalinyarada ah ee korniinka ayaa kori doona aqalka dhirta lagu koriyo. Maanta, waxaad si sahlan u iibsan kartaa dhismayaasha dhirta lagu diyaariyo ee lagu diyaariyo in badan, ama qaadashada wax soosaarka madaxbannaan ee qaabkan fudud. Isku dhafka aqalka aqalka dhirta lagu koriyo A aqalka dhirta lagu koriyo waa dhismo yar oo geedo sii kordhaya oo ka ilaaliya isbeddelka heerkulka iyo dhacdooyinka cimilada.
Siyaabo kala duwan oo loo sameeyo geedo laga samaysto geedo daboolan
Geedka aqalka dhirta lagu sameeyo - dhismaha kharashka ugu yar iyo qiimaha hooseeya ee helitaanka miraha hore ee khudradda xilliga xagaaga. Way fududahay in la rakibo, si sahlan u guurto meel kasta oo la rabo, oo waxaad ku kori kartaa wixii dalag beerta thermofilic ah. Waxyaalaha shaxda ah Marka laga soo horjeedo caasimadda, qaababka culus ee qaabka lagu koriyo, dhismaha aqallada dhirta lagu koriyo ee cirifka waa sida iftiinka ah.
Dhis naftaada: Qolka aqalka dhirta caaga ah leh gacmo gaar ah
Laakiin deggenayaasha ganacsiga iyo kuwa dhaqaalaha ee xagaaga, dadka ku nool dhulka miyiga ah waxay si deg deg ah u dareemaan qiimaha qashinkaas aan faa'iido lahayn ee beerta. Haatan dhismayaasha asalka ah ee noocyada kala duwan ee naqshadeynta naqshadaha waxaa laga arki karaa goobo badan. Helitaanka alaabta Waxyaabaha lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo ayaa u baahan kharash badan.
Waxaannu dhiseynaa aqalka dhirta lagu koriyo ama aqalka dhirta yar-yar ee dacha, alwaax iyo naqshado kale oo u gaar ah.
Wixii beerta, guga waa waqti kulul iyo adag tahay. Cimiladu waxay badasho dhowr jeer maalintii. Sidee loo qiyaasaa taariikhda beerashada khudradda si aanay u dhicin dhaxan Habka ugu fiican waa in la dhiso meel bannaan oo loogu talagalay beeritaanka dalagyada kulaylka jecel, ka dibna dhirtaadu waxay awoodi doonaan inay koraan xaalado raaxo leh ka hor inta aan la gaarin maalmaha xagaaga.
Sidee loo sameyaa "Breadbox" oo gacmahaaga ah ku sawiraan sawirka?
Khambnitsa ayaa ku mashquulsan dadweynaha xagaaga si loogu fududeeyo rakibid sahlan, sahlanaanta socodsiinta iyo cimilada. Darbiyada furitaanka ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa si toos ah u helaya dalagyada dalagyada dhirta, waraabinta, iyo goosashada. Greenhouse "Breadbox" waa sahlan tahay in la isticmaalo oo uu leeyahay naqshad fudud. Qaababka Naqshadaynta Naqshad dillaacsan waxay ka kooban tahay saddex qeybood: midig, bidix, saldhigga.
Waxaan samaynaa nafleyda aqalka dhirta lagu koriyo ee PVC iyo tubooyinka polypropylene
Xuddunta waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aqalka dhirta lagu koriyo, xoogga iyo adkeysiga qaabdhismeedka waxay kuxirantahay walxaha. Guryaha lagu sameeyo maaddooyinka polypropylene ama tuubooyinka PVC waxay noqdaan kuwo aad u ballaadhan oo soo noqnoqda, taas oo badanaa sabab u ah tirada badan ee faa'iidooyinka iyo qiimaha la awoodi karo.
Waxaan soo aruurineynaa kaaliyaha waddanka ee lagu kalsoonaan karo - aqalka dhirta lagu koriyo oo laga soo qaado tuubooyin qoto dheer leh gacmihiisa
Qaybta ugu muhiimsan ee aqalka dhirta lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo. Awoodiisu waxay fududeysaa isticmaalka qaab-dhismeedka iyo cimilada. Waxay ka samaysan tahay qoryo iyo caag, laakiin birta ayaa ah xal ugu kalsoon. Tixgeli waxyaabaha ku saabsan hannaanka aqalka dhirta lagu koriyo ee tuubada qadka ah iyo tiknoolajiyada dhismaha ayadoo la gacmoonayo.
Waxaan dhisi karnaa aqalka dhirta yaryar ee daaqadaha hore
Durbadiiba si ay u soo ururiyaan daaqadaha daaqadaha dabaasha ee aqalka dhirta lagu koriyo, ama dhowr darsin oo loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo - guulo naadir ah oo loogu talagalay mulkiilaha guriga. Badanaa waxaa lagu qariyey dhismaha si loo burburiyo. Halkan, sida ay yiraahdaan, laba hal mid ah - iyo daaqado badan, oo dhammaantood waa isku mid. Laakiin guryaha waa la burburin karaa, iyo mid waa in uu ku qanacsan yahay helitaanka naadir ah ee muraayadaha daaqadaha banaanka laga dhigo marka dib loo badalo daaqadaha.
Waxa la dhiso aqalka dhirta lagu koriyo: dooro maaddada qaabka
Samaynta go'aan lagu dhisayo aqalka dhirta lagu koriyo ee goobta, milkiilaha kasta, ugu horeyntii, waxaa la kulmaya xulashada qalabka ka soo baxaya aqalka dhirta lagu koriyo. Ugu horreyntii waxay ku saabsan tahay doorashada xulashada shaxda. Go'aanka kama dambaysta ah waxaa saameyn ku leh arrimo badan - qalabka la heli karo, qiimaha alaabta la soo iibsaday, dabiiciga ku-meel-gaadhka ah ama dabiiciga ah ee aqalka dhirta lagu dhisi karo, qaabka la doonayo ee ku xiran xaaladaha goobta, iyo xaalado kale oo badan.
Iyadoo aan lahayn aqalka dhirta lagu koriyo ee dalka ma sameyn karo. Si dhakhso ah, aqalka dhirta "fudud" ayaa laga sameeyaa dhalo qurxoon oo leh dhaldhalaal qafiif ah. Naqshadeynta dhirta, naqshaddaan fudud waxay qabataa, si kastaba ha ahaatee, dhammaan hawlaha ugu muhiimsan ee aqalka dhirta lagu koriyo: Waxay ka ilaalisaa abuuritaanka saamaynta dibedda (qabow, dabayl, roob, cayayaanka, iwm.
Waxaan naftaada u sameynaa: Caleenta geedo geedo leh gacmahooda
Greenhouse for geedo, laga sameeyey by gacanta alaabta waraaqda ah, beddel weyn oo dhismayaasha dhirta diyaar ah. Kharashkoodu aad buu u hooseeyaa, dhismaheeduna waa mid sahlan oo waxaa sameeya milkiile kasta oo aan lahayn xitaa xirfado dhisme oo gaar ah. Goorma la dhigaa? Waa suurtagal in la magacaabo tirada si sax ah marka dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo loogu talagalay geedo lagu talinayo.
Sida loo doorto habka kuleylka iyo u qaboojinta kuleylka lagu koriyo?
Cimilada cimilada, khudradda sii kordhaysa waxay leedahay dhowr dhibaatooyin. Dibadda, xataa beerista geedo guga inta badan u baahan tahay isticmaalka ugu yaraan aqalka dhirta lagu koriyo. Iyo rabitaanka ah in la helo laba dalag xilli ciyaareedkii, iyo xitaa in ka badan goos goosashada goosashada, waxay u baahan tahay dhismaha aqalka dhirta kulul ee goobta. Waa maxay sababta kulaylka loo dhigo?
Dhamaan waxyaaba kala duwan ee lagu xirayo lagu koriyo, filim lagu koriyo
Maaddooyin kala duwan oo ku habboon qalabka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa kor u qaadaya dhibaatada doorashada. Si aan loogu qaldamin oo aysan lacag bixin lacag dheeraad ah, waa lagama maarmaan in la fahmo astaamaha mid kasta oo ka mid ah doorashooyinka la soo jeediyey. Noocyada alaabta daboolka ah Noocyada soo socda ee alaabta lagu daboolo ee lagu koriyo iyo aqallada lagu koriyo ayaa ah kuwa ugu caamsan: filimka fiilooyinka iyo farsamada, muraayadaha iyo qalabka aan la dubin.
Xeerarka iyo siraha koritaanka, aqalka dhirta lagu kariyo ee basbaasku adigaa sameeya
Dhammaan basbaaska: kulul iyo dabacsanaan, macaan iyo qadhaadh - kulaylka-jecel. Sidaa darteed, habka ugu wanaagsan ee loo helo goosashada qani ku ah waa habka kor loogu qaado korriinka. Beeridda aqalka dhirta lagu koriyo ayaa suuragal ah in muddooyinka hore, iyo nadiifinta basbaas dhulka hoostiisa ah ayaa dib loo dhigayaa ilaa la qaboojiyo heer sare ah. Greenhouse samee naftaada A yar yar, aqalka dhirta lagu kariyo ee basbaaska fura inta ugu macquulsan ee cimilada diiran waa habka ugu wanaagsan ee lagu kori karo.
Sida loo qalabeeyo aqalka dhirta lagu koriyo ee balakoonka ah adiga ayaa sameeya
Miro-lagu koriyo oo loogu talagalay geedo waxaa loo isticmaalaa marka ay ku koraan balakoonka balaaran. Keenaya dhirta balakoonka waxaa lagu talinayaa in ay adkaato oo ay ka hortagaan jahwareer la'aanta iftiinka guriga. Tilmaamo Naqshadeeyn Kala duwanaansho cagaarka xagaaga, aqallada lagu koriyo ee balakoonka waa buug-yar oo loogu talagalay in lagu xiro geedo dhowr ah.
Aqalka dhirta lagu koriyo (polycarbonate) guriga
Marka lagu daro beerista, lagu koriyo waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah aaladaha ugu wax ku oolka badan. Iyadoo caawimadeeda, waxaa suurtagal ah in la helo wax soo saarka beeraha hore, daboola dhirta aan u adkeysan karin baraf, xitaa waxay leeyihiin cagaaran cusub xilliga qabow. Isla mar ahaantaana, ma ahan lagama maarmaan in lacag lagu isticmaalo iibsashada aqalka dhirta lagu diyaariyo, waa wax aad u macquul ah beerta caadiga ah si loo dhiso qaabdhismeed noocaas ah.
Guryaha: Goobaha dhismaha iyo sifooyinka koraya
Caagga sanka, iyo dhirta qaarkood waa waqtigii diyaarinta beerto. Oo maxaa la yidhaahdaa haddii ay tahay hargab? Markaa dhaqanka kulaylka-jecel wuu baabi'i doonaa, xasuusana keliya ayaa ku sii jiri doona. Xaaladdan, waxaa lagu talinayaa in la dhiso aqalka dhirta lagu koriyo. Dhismahan waxaa lagu dhisi doonaa si sax ah sariiraha, waxa uu si taxadar leh u ilaalin doonaa waxyaabo aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn.
Milkiilayaasha guryaha waxay door bidaan in ay beeraan khudaarta, halkii ay ka iibsan lahaayeen dukaanka. Go'aaminta jaleecada ugu horeysa haddii sheyga miiska saaran yahay mid waxyeello leh ama faa'iido leh waa mid adag. Sidaa darteed, iyaga oo nafaqo leh oo nafaqo leh oo nafaqo leh leh ayaa ku jira meel kasta oo ka mid ah dadka degaanka. Caawiye weyn waa aqalka dhirta lagu koriyo. Waxay ka caawisaa kordhinta wax-soosaarka.
Dhirta sare, amniga, yareynta foosha - agrofibre ee strawberries sii kordhaya
Isticmaalka agrofibre, qalab aan takhasus lahayn oo aan khibrad lahayn waa isbeddel muuqda oo cusub ee tiknoolojiyada beeraha, ma aha in ka badan 15-20 sano. Laakiin horeyba waqti gaaban, waxa ay ka heshay caan ka mid ah beeraleyda iyo kuwa jecel shaqada inay ku jiraan qoraalo yar yar. Qalabkani wuxuu u ogolaanayaa in uu gaaro heer sare iyo mid goos goos ah iyo, isla mar ahaantaana, si wax ku ool ah u fududeynaya hababka ugu xoogsan ee shaqada ee beerta.
Beeraley kasta oo goobta ku yaal wuxuu dhisi karaa aqalka dhirta lagu koriyo ee jiilaalka leh gacmihiisa.
Waxaa jira fikrado badan oo lagu abuurayo aqalka dhirta lagu koriyo ee jiilaalka. Qaababkani ma laha qoondayn adag. Waxay ka samaysan karaan muraayadda, filimada, polycarbonate leh shey alwaax ama bir ah. Hababka kuleylka ee lagu koriyo waa kuwo kala duwan. Waxaa macquul ah in la kululeeyo dhismaha biyo kulul, koronto, biofuel, cunto kariyaha caadiga ah.